Sifooyinka isbarbardhiga ee noocyada baradhada hore COLOMBA iyo PRIMABELLE - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Sifooyinka isbarbardhiga ee noocyada baradhada hore COLOMBA iyo PRIMABELLE
в Talobixin takhasus leh
Dhamaadkii Diisambar, majaladda "Nidaamka Baradhadu" waxay abaabushay webinar loogu talagalay noocyo baradho casri ah oo rajo leh. Webinar waxaa ka soo qaybgalay wakiillo caan ku ah taranka iyo shirkadaha abuurka ee ka shaqeeya suuqa Ruushka. Shirkad kasta waxay u sheegtay dhagaystayaasha waxtarka iyo astaamaha labada nooc ee khadkooda.
Waxaan go'aansanay inaan u haynno macluumaadkan waxtar u leh akhristayaashayada annagoo ku daabacayna bogga maqaallo taxane ah.
Qodobka afraad ee wareeggan ayaa loogu talagalay laba nooc oo hore - COLOMBA iyo PRIMABELLE xulashada HZPC Holland BV
Hadalka: Anna Khrabrova, Maareeyaha Ganacsiga HZPC Sadokas.
HZPC Sadokas waa qaybta Ruushka ee breeder Dutch HZPC Holland BV
Si aad u taariikhda, HZPC Sadokas waxay gashay in kabadan 20 nooc oo ah Diiwaan Gelinta Guusha Taranka ee Xiriirka Ruushka, 12 kamid ah waxay kujiraan wax soosaarka Ruushka: kuwani waa COLOMBA, PRIMABELLE, MEMPHIS, SILVANA, PANTHER, DZHOKONDA, SIFRA, HERMOZA, SAGITTA, LUSINDA, CHALLENGER iyo. Abuurka waxaa laga soo saaray toddobo goobood oo ku yaal toddobo gobol oo ka tirsan Ruushka. Wadarta wax soosaarka ayaa ka badan 550 hektar. Shirkaddu waxay hirgelisaa wareegga buuxa ee soo-saarka abuurka: laga soo bilaabo tuubada tijaabada si loo helo aqoonyahannada iyo taranka ugu horreeya.
Waxaa badanaa naloo weydiiyaa inaan isbarbar dhigno noocyo kala duwan (badiyaa dadku waxay xiiseynayaan inay isbarbar dhigaan astaamaha noocyada u eg bislaanshaha). Talooyinka akhristayaasha kanaalka Agronomia (kanaalka telegram ee majaladda Nidaamka Baradhada), waxaan u dooranay laba nooc oo hore oo isbarbardhig ah - COLOMBU iyo PRIMABELLE.
Kala sooc Colombo
COLOMBA Waa noocyo leh taariikh. Maanta waa noocyada ugu iibinta badan ee taranka shirkadda. HZPC Holland BV ee Ruushka. Muddada daaqa: 60-65 maalmood (laga bilaabo xilliga biqilka ilaa bislaanshaha buuxa ee bayoolojiga).
PRIMABELLE - noocyo cusub. Waxa kale oo uu hore u galay Diiwaangelinta, laakiin ku saleysan khibrad, waxaan la soconnaa in xilliga sii kordhaysa ee noocyadan kala duwan ay yihiin 65-70 maalmood.
Noocyadan waxay leeyihiin qaabab waalidnimo oo isku mid ah, taas oo macnaheedu yahay inay waxyaabo badan wadaagaan.
Tusaale ahaan, digriiga labaduba waxay leeyihiin qaab isku wareegsan-oval ah. Jidhka labaduba waa jaalle cirro leh.
Waxyaabaha qallalan ee qallalan waxay ku saabsan yihiin 17% (taas oo loo tixgeliyo caadada noocyada hore). Isla mar ahaantaana, waxaan jeclaan lahaa inaan dareenkaaga u soo jeediyo xaqiiqda ah in marka abuurka noocyadan kala duwan la beero oo loo dhigo kaydinta (labadaba COLOMBA iyo PRIMABELLE labaduba si qumman ayey u keydsan yihiin), waa inaad hubisaa in waxyaalaha qallalan ee ku jira digriiga aysan ka hooseyn 16%. Tilmaamahan ayaa ah dammaanad qaad in baradhada si wanaagsan loo jiifiyay oo ay u kori doonaan si ammaan ah marka la beero guga.
Haddaba aan u gudubno kala duwanaanshaha.
PRIMABELLE wuxuu sameeyaa tiro badan oo digrii ah (waxaa jiri doona qiyaastii 15-16 kumbiyuutar halkii baadiya), marka la barbardhigo COLOMBO. Laakiin suuqgeynta (tirada digriiga oo dhexroorkeedu yahay 45+ mm iyo ka badan) ayaa ka hooseeya PRIMABELLE. Taasi waa, iyadoo si ballaadhan loo dhigayo digriiga, waxaa jira jajab yar. Laakiin waad la dagaallami kartaa tan.
Si loo helo suuqgeynta ugu badan ee PRIMABELLE, dhirtu waa in la weynaadaa. Isbarbar dhig: markaad beero baradhada noocyada kala duwan ee COLOMBA (jajabka jajabka 30-55 mm), 40-42 kun oo dhir / ha ah ayaa loo tixgelin doonaa inay yihiin wax caadi ah. Marka laga hadlayo PRIMABELLE (markii loo koray ujeedooyin miis), waxaan kugula talineynaa in la beero 44-45 kun oo geed / ha.
Nafaqada macdanta. Wixii PRIMABELLE (sida noocyada hore), waxaan kugula talineynaa inaad bacrimiyo (gaar ahaan nitrogen) aad ku dalbatid hal talaabo kahor intaanad beerin Tan awgeed, hoos u dhac ku yimaada xilliga koriinka ayaa la gaadhay waxaana suurtagal ah in la sameeyo samaynta suuq-geynta ugu badan. Bacriminta ay kujiraan koloriin waa in la mariyaa lix asbuuc ka hor intaan la beerin si koloriinku uumi u baxdo geedka wuxuu u sameysan karaa wax caadi ah oo qallalan ee digriiga, taas oo ka dhigaysa baradhada mid dhadhan fiican leh.
Waxaan kaloo rabaa inaan diirada saaro beero qoto dheer. Had iyo jeer waxaan dhahnaa COLOMBU waxay ubaahantahay in lagu beero 2 cm oo qoto dheer celceliska kaladuwanaanta hore. Iyo PRIMABELLE waa in la dhigaa 3 cm qoto dheer, maxaa yeelay noocani wuxuu dhigayaa digriiga ka sarreeya kan waalidka, halka ay jiri doonaan digriino waxoogaa ka yar marka loo eego kan COLOMBE.
Waxaan jeclaan lahayn inaan xoogga saarno faa'iidooyinka 'PRIMABELLE', oo naga dhigaya inaan ka hadalno noocyadan kala duwan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha mustaqbalka.
Ugu horreyntii, tani waa xogta wax soo saarka aad u fiican: PRIMABELLE wuxuu leeyahay maqaar dhalaalaya oo jilicsan, indhuhuna aad ayey uga yar yihiin kuwa ku jira digriiga COLOMBA.
Iska caabinta cudurada. Tilmaamahan, labada noocba waa Dutch caadi ah. Waxaa lagu gartaa iska caabin xoogaa daciif u ah fayraska Y, laakiin isla waqtigaas PRIMABELL muuqaalka muuqaalka ee fayrasku aad ayuu u dhalaalayaa, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la sameeyo sifayn buuxda oo jirka ah isla markaana ka dhigaysa nolosha kuwa beera abuurka mid fudud.
ka liidata noocyada 'COLOMBA' marka loo eego iska caabbinta dusha sare ee qallalka goor dambe, laakiin tilmaamahan waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la adeegsanayo alaabada ilaalinta dhirta.
way u nugul tahay qolofta - budada iyo kuwa caadiga ahba. Laakiin iyadoo la adeegsanayo waraabinta karti iyo caqli gal ah, xaalada waa la nidaamin karaa.
adkaysi u leh Alternaria iyo waxyeelada farsamo. Sannadkan, labadaba tilmaamahan waxay ahaayeen kuwo aad u khuseeya.
Waxaan sidoo kale la soconaa in xilligan dhammaan mugga abuurka 'PRIMABELLE' mar hore la iibiyay, laakiin marka la gaaro xilliga 2021/22 wax soo saarka ayaa la kordhin doonaa.
Tags: HZ-P-Si-Sadokas JSCColomboPrimabellenoocyo baradho hore
ShareShare77Share55Si aad u soo diri